केही समयअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फोन गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी प्रकट गरेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले एमालेमा प्रवेश गर्ने संकेत गरेकी छन्।
मंगलबार दिउँसो फेसबुकमा उनले केपी शर्मा ओलीसमेतको नाम देखिने मोबाइल कलको स्क्रिनसट सेयर गर्दै लगत्तै ‘उहाँलाई अवश्य भेट्नेछु’ भनेकी हुन्।
लिंगेपिङको संस्कृति जोगाउन बन्यो गीत ‘च च हुई’
बुटवलको ब्याण्ड ‘अमेध्यं’ ले दसैं र तिहार गीत ‘च च हुई’ ल्याएको छ । लोक रक संगीत पृष्ठभूमि भएको व्याण्डले समुदायबाट हराउँदै गएको लिंगे पिङ संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने जोड गीतमा दिइएको छ । गीतमा सुजल रानाको स्वर, ओम शंकर श्रेष्ठको शब्द छ ।
भिडियोमा सुजल राना, विजय विश्वकर्मा, भिवास थापामगर, सिओन जिओन, विकास रेग्मी, आनन्द खड्का, विमा थापामगर, अञ्जिला क्षेत्री, ममता पुन मगर, थानी राना मगर, सब्रिना क्षेत्री, सुशान्त पाण्डे, मधुकला कुँवर, वर्षा पन्थी, दीपक पन्थी, रमा केसी, ममता केसी, रामु रावल, चित्रबहादुर झेडी, किशोर सारु, तिलवीर खाम्चा र मन्दकुमारी खाम्चाको अभिनय छ ।
बालकलाकारहरु अमृत राना, अमन खाम्चा, स्मृति खाम्चा, रश्मी खाम्चा, सुप्रिया राना, गीता राना, सबिन राना, हिमाल खाम्चा, अनुष्का राना, मौसम रानालगायतको पनि अभिनय रहेको भिडियोमा आनन्द खड्का र बिमा थापा मगरको कोरियोग्राफी छ ।
भिडियोमा आकाश धिमालको छायाँकन र सम्पादन तथा आकाश धिमाल र रमेश रिजालको निर्देशन छ । व्याण्डका संस्थापक अशोक थापाले व्याण्डले १९७४ एडी, अलबर्टोस, मंगोलियन हार्ट, मन्त्र, सबिन राई, द एज व्याण्डलगायतसँग स्टेज सहकार्य गरिसकेका छन् ।
२०१६ सालमा स्थापना भएको यो ब्याण्डले परम्परादेखि चल्दै आएको लिंगे पिङ संस्कृतिलाई जोगाइरहनुपर्ने सन्देश दिन गीत बनाएको गायक थापाले बताए ।
विक्की र कट्रिनाको विवाहमा कडा कानुन,मोवाइल लगे कार्वाही गरिने
सलमान बिहेमा आइदियोस् भन्ने चाहन्छिन् कट्रिना तर…
जनवादी गायक जीवन शर्माको यो तस्विर, कसरी भयो एकाएक भाइरल ?
विक्की र कट्रिनाको विवाह विरुद्ध कसले दियो उजुरी ?
कट्रिनाको बिहेमा सलमानका बडीगार्ड शेराले पाए यस्तो जिम्मेवारी
‘महाठग’सँग खुल्लमखुल्ला रोमान्स गरिरहेकी अभिनेत्री ज्याकलिनको कति छ सम्पत्ति ?